तपाई आफु कति सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने देखाउने ५ संकेतहरु, तपाईको जीवनमा छन् नि ? - उज्यालो पाटो
‘भन्नलाई सजिलो छ तर परे पछि मात्रै थाहा हुन्छ’ यो यस्तो भनाइ हो जसलाई धेरैले आफुले कति बेहोरिरहेको छु भन्ने प्रमाणित गर्न प्रयोग गर्छन् । मैले मेरो जिन्दगीमा बेहोरेको दुख र अफ्ठ्यारो तिमीले भोगेका छैनौँ त्यसकारण यति सजिलै भन्दिन्छौ भनेर कसैको मुख टाल्न सायद यो निकै महत्वपुर्ण वाक्य हो ।
कसैले आफ्नो भोगाइलाई साह्रै ठुलो ठान्नु अनौठो कुरा पनि होइन, तर मेरो मात्रै भोगाइ वा मेरो मात्रै दुख संसारकै ठुलो हो भन्नु चै भ्रम मात्रै हो । तर यो भ्रम सबैमा नै रहन्छ । संसारमा एकदमै थोरै मानिसले मात्रै यो दुख धेरैलाई पर्छ, मलाई पनि पर्यो भनेर सामान्यीकरण गर्न सक्छन् । कतिपय अवस्था त यस्तो पनि हुन्छ कि दैनिक जीवनमा आइपुर्ने झमेला र अफ्ठ्याराकै कारण मानिस आफुलाई निर्बल, असक्षम र कम महत्वपुर्णको सम्झिन थाल्छ तर मानिसले बिर्सिन्छ कि कसैको जीवनमा दुख र अफ्ठ्यारो मात्रै हुदैन । कहिलेकाँही झमेलाहरुले मानिसका राम्रा पक्ष र सबलतालाई छोपिदिएको हुन्छ ।
यसो त तपाई कति महत्वपुर्ण र सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने धेरै कुराहरुले संकेत गरिरहेका हुन्छन् । हुन सक्छ, तपाईले चाहे जस्तै कुराहरुको तपाई प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्नु हुन्छ तर त्यसको अर्थ यो होइन कि तपाई कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्नु हुदैन । खाली दृष्टिकोण बदल्नु पर्ने मात्रै पनि हुन सक्छ । आज यो लेखमा म ति कुराहरुका बारेमा लेख्दैछु जसले तपाईलाई तपाईको सक्षमताका बारेमा जानकारी दिन्छन् । तपाईले ति संकेतहरुलाई कम आँक्नु भएको हुन सक्छ । म ति संकेतहरुमा लागेका पर्दालाई खसाउने प्रयास गर्नेछु ।
१. के गर्नु पर्छ भन्ने होइन, के गरेँ भन्ने सूचि बनाउनुहोस्
स्विकार्नुहोस् कि गर्नु पर्ने कामको ताँती देखेर कहिलेकाँही त मुटु फुट्ला जस्तो हुन्छ नि ! करिअरको लागि गर्नु पर्ने कुराहरु, परिवारका लागि गर्नु पर्ने कुराहरु, समाजका लागि गरिदिनु पर्ने कुराहरु अनि अफिसका लागि नगरी नहुने कुराहरु । साँच्चै नै आत्याउँने गरिका सूचि हुन्छन् जीवनमा । यी कुराहरु मात्रै सोचियो भने आफुले केहि गर्न नसकेको र जीवन त्यसै खेर गइरहेको जस्तो भावना आउँनु सामान्य कुरा हो ।
कतिपयले तनाव कम गर्न गर्नु पर्ने कामहरुको दैनिक सूचि बनाएका पनि हुन्छन् तर यो जति नै सकारात्मक भए पनि एक पक्षिय कुरा भयो । तपाईको जीवनमा गर्नु पर्ने कामको सूचिले मात्रै सकारात्मक भाव दिदैन, बरु के के गरियो भन्ने कामको सूचिले झन् धेरै सकारात्मक बनाउछ । यसैले त्यस्ता कामहरुको सूचि बनाउनु होस् । ति सूचिमा ठुला काम मात्रै राख्न पर्दैन । साना कामहरुले पनि गरेका काम र तपाईले लगानी गर्नु भएको समयको दस्तावेज बनाउँछन् । यसमा तपाईले बिजुलीको बिल तिरेदेखि कुकुरका लागि खाना दिएको सम्म काम राख्न सक्नु हुनेछ । सक्दो सूचि लामो बनाउनुहोस् ।
२. युट्युबमा हेर्छु भनेका फिल्महरु नबिर्सनुहोस्
टिभी हेरेर बस्नु तथा अनलाइनमा फिल्म हेरेर बस्नु कसरत गराउने गुरुहरु तथा सिर्जनशील हुनु पर्छ भन्ने कलाकार तथा व्यवसायीहरुको नजरमा समयको बर्बादी मात्रै होला । तर त्यो त उनीहरुको इच्छाको बिषय हो । त्यसले तपाईको इच्छा पुरा नगर्न सक्छ र तपाईलाई ति कुराहरु प्रति चासो र जाँगर नहुदा आफु झन् कमजोर भए जस्तो अनुभुति गराउन सक्छ । यसैले ति प्रेरणादायी कुराहरुलाई अलिकति पर धकेल्नुहोस् र युट्युबमा हेर्छु भनेर राखेका फिल्महरु हेर्नुहोस् ।
ति फिल्म हेर्न समय दिदै गर्दा याद गर्नुहोला, तपाईले आफ्नो लागि समय निकालेर आफुलाई खुसी बनाउदै हुनुहुन्छ । तपाई आफुलाई खुसी बनाउन सक्षम हुनुहुन्छ । त्यो भन्दा अर्थोक के चाहियो जीवनमा । यसै पनि अरुका लागि केहि दिनु भन्दा पहिले आफु भरिएको हुनै पर्छ । आफुसँग हुदै नभएको कुरा अरुलाई दिनै सकिदैन ।
३. फेसबुकबाट एकछिन छुट्टी लिनुहोस्
सामाजिक साइटको कहिलै नसकिने जस्तो टाइमलाइनलाई घिसार्दा घिसार्दा अनि अनेक मानिसहरुको बनावटी खुसी देखिदा कहिलेकाँही आफ्नो मात्रै जीन्दगीमा केहि नभएको जस्तो महसुस गर्छ । त्यस्तै, को नजिकको र को अलि टाढाको भन्ने पनि छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । यसैले फेसबुक लगायतका सामाजिक साइटबाट एकछिन छुट्टी लिनुहोस् । वास्तवमै आफ्ना कति साथी छन् भन्ने छुट्याउनुहोस् । यसले आफ्नो वास्तविक जीवनमा नियाल्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ । कम साथी भए केहि छैन, साथी बनाउन के गर्नु पर्छ भनेर खोजी गर्नुहोस् ।
३. लाजसरमको चक्रबाट निस्कनुहोस्
आफ्नो जीवन माया, खुसी र महत्वका लागि कति उल्लेख्य छ भन्ने थाहा पाउनका लागि सबै भन्दा पहिले लाज र पश्चाताप बिचको फरक थाहा पाउनु पर्छ । लाज र पश्चाताप फरक फरक कुरा हुन् । मैले खराब काम गरेँ भन्नु पश्चाताप हो तर म खराब हुँ भन्नु लाजसरम हो । पश्चातापले तपाईलाई सुधार्न भुमिका खेल्छ तर लाजसरमले तपाईलाई भित्रैदेखि खोक्रो बनाउँछ ।
हुन त यी दुवै भावनाहरु मानिसका लागि असाध्यै मानविय र स्वभाविक भावनाहरु हुन् । फरक यति हो कि पश्चाताप उत्पादनशील भावना हो । पश्चातापले तपाईलाई सकारात्मकरुपमा फेरिनका लागि र आफ्नो असफलतालाई सफलतामा बदल्न सहयोग गर्छ । तपाईले कुनै काम खराब गर्नु भयो भने सुधार्नु होस् र अगाडी बढ्नुहोस् । जब यो समस्या समाधान हुन्छ तब थाहा पाउनुहुन्छ कि समस्या समाधानमा तपाई कति सक्षम हुनुहुन्छ ।
४. बिषाक्त साथी र आफन्तलाई पाखा लाउनुहोस्
तपाईको कुनै साथी छ, जसलाई समस्या सुनायो भने जवाफ नै दिदैन ? सिर्जनशीलताका कुरा गर्यो भने उल्टै उडाउँछ ? आफन्त छन्, जो पैसा मात्रै माग्छन् र तपाईको अफ्ठ्यारो बुझ्दैनन् ? तपाईले गर्न लागेका कुराप्रति नकारात्मक धारणा मात्रै राख्छन् ? यस्तो अवस्था छ भने ति बिषाक्त साथी र आफन्तहरुलाई पाखा लाउनुहोस् ।
तपाईका सबै कुराप्रति समर्थन गर्नु पर्छ भन्ने छैन । तपाईको कमीकमजोरी हटाएर त्यसलाई झन् राम्रो बनाउन आलोचना गर्नु राम्रो हो तर केवल नकारात्मक कुराले मात्रै त्यो गर्न सक्दैन । यो कुरा तपाईलाई पनि थाहा हुन्छ तर ति साथी र आफन्तलाई कसरी टाढा पार्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई अफ्ठ्यारो लागिरहेको हुन सक्छ । आँट गरेर कुशलतापुर्वक ति मानिसहरुलाई पाखा लाउनुहोस् । यसले निरन्तर तपाईलाई नकारात्मक पाटो मात्रै देखाउनेहरु तपाईको जीवनबाट कम हुन्छन् र तपाईले आफ्नो सक्षमता पनि देख्न पाउनुहुनेछ ।
५. प्रंशसालाई लेख्नुहोस्
मान्छेको स्वभावजन्य कुरा हो कि कसैले भनेका नराम्रा कुरा लामो समयसम्म दिमागमा रहन्छ तर कसैले गरेको तारिफ वा प्रशंसा चाँडो समयमा नै दिमागबाट हट्छन् । यसले गर्दा आफ्नो दिमागमा केवल अरुबाट पाएका नकारात्मक गाली तथा आरोपहरु धेरै रहन्छन् भने प्रशंसाका कुराहरु कम हुदै र हराउँदै जान्छन् । यसको प्रभाव तपाईको मनस्थितिमा नै पर्छ । धेरै यस्ता कुराहरु थुप्रिदै जाँदा तपाई आफुले आफुलाई नै कम महत्वको सम्झिन थाल्नु हुनेछ । यसैले प्रशंसा नबिर्सनुहोस् । लेख्नुहोस् । ति कुराहरु सम्झिरहदा आफ्नो महत्व छ भन्ने कुराको पुनरावृति भइरहन्छ ।
चिन्ता लिनु राम्रो हो तर त्यति मात्रै लिनुहोस्, जति लिदा काम बन्छ
दिमागमा भएको पैसालाई बैंकमा सार्ने कसरी ? सजिलो बाटो यस्तो छ
बाँदरले मुठ्ठी खोलेन, कस्तो मुर्ख ? – १ मिनेट अध्ययन